Ny fomba fiovan'ny paikadin'ny varotra amin'ny haino aman-jery sosialy
Ny hetsika Techmakers manaraka dia ho iray manokana! Misaotra hatrany aho noho ny fahafaha-miteny ary manome ny mpihaino izay tsy mitovy amin'izany ny Techmakers. Ireo mpanao teknolojia dia matihanina amin'ny teknolojia izay manaparitaka ny elanelana misy eo an-damosin'ny farany sy ny any ivelany. Misy koa fifangaroana orinasa kely sy lehibe manatrika ireo hetsika ireo.
Ny hetsika manaraka dia amin'ny Trano fanaovan-tsakafo any Scotty afovoan-tanàna ny talata 5 janoary amin'ny 5:30 hariva. Manantena aho fa afaka manatrika ianao! Tena nitombo izahay tamin'ny fotoana iray izay nakanay ny efitranon'ny fiainana manokana roa samy hafa tany Scotty's!
Hiresaka momba ny manova ny paradigma fivarotana. Ireo mpivarotra izay tsy nahazo teknolojia dia maka seza aoriana ho an'ireo izay manana ary mitombo ny elanelana. Ny sampana fivarotana nentim-paharazana ivelany tsy misy fanatrehana an-tserasera dia mampidi-doza amin'ny asany.
Ny olana dia ny mpanjifa sy ny orinasa ankehitriny dia tsy mampino fitaovana sy tambajotra misy azy ireo an-tserasera manampy amin'ny fampianarana azy ireo amin'ny fividianana sy ny fanapaha-kevitra amin'ny orinasa. Misy tambajotra mifototra amin'ny vondrom-piarahamonina an-tserasera, teny lakile search engine, ary bilaogy manome vaovao ho an'ny mpanjifa sy ny orinasa alohan'ny izy ireo dia miantso na miresaka amin'ireo solontenan'ny varotrao.
Amin'ny fotoana ahatongavan'ny vinavina eo amin'ny tranokalanao, amin'ny telefaona, na eo am-baravaranao, dia fantany kokoa indraindray ny vokatrao, ny serivisinao, ny tanjakao, ny fahalemenao ary ny orinasanao amin'ny ankapobeny araka izay itiavanao azy ireo.
Taloha, ny mpivarotrao no làlan-kaleha teo anelanelan'ny vina sy ny varotra. Tsy marina intsony izany. Ankehitriny ny fampahalalana azo ampahibemaso amin'ny Internet dia ny lakan-drano. Vokatr'izany, raha te ho eo ny orinasanao rehefa eo amin'ny dingana lehibe ny olona amin'ny fandraisana fanapahan-kevitra, ny olona varotra dia tokony ho eo amin'ny Internet izay misy izany fanapahan-kevitra izany.
Miantso vola dolara tsy ny hany fampitomboana ny varotra intsony. Tsy manohitra ny fiantsoana ivelany aho, fa raha mila vokatra tsaratsara kokoa amin'ny fandanianao ny varotra ianao dia mila mandanjalanja ny antso ivelany amin'ny hetsika tambajotra an-tserasera sy ivelany. Ny fifandanjana amin'ireo hetsika rehetra ireo dia hanome ny orinasanao fampiroboroboana bebe kokoa, fahefana… ary farany, fitokisana. Mandritra ny fotoana maharitra, hanana fantsom-pivarotana salama kokoa ianao.
Ny tsara indrindra dia azo refesina tsara ireo fomba fiasa ireo. Azontsika atao ny mandrefy ny fifamoivoizana sy ny fiovam-po avy amin'ireo tranokala fandinihana, lahatahiry an-tserasera, tranokala miresaka ary bilaogy, tambajotra sosialy toa ny LinkedIn sy Facebook, ary koa ny mpampita vaovao toy ny Twitter. Ireo paikady ireo dia mitaky fanamafisana ihany koa… ny fampiasam-bola mandritra ny herinandro vitsivitsy amin'ny paikady an-tserasera dia tsy hanampy ny orinasanao - fa ny fampiasam-bola herintaona dia mety hampitombo ny orinasanao haingana kokoa noho izay noeritreretinao.
Manantena aho fa hahita anao amin'ny hetsika hiresaka bebe kokoa momba ny paikady sy ny fitaovana azonao raisina amin'ny orinasanao hanombohana manangana ireo paikady fivarotana vaovao ireo.
Tags: paradigma fivarotanapaikady varotrampivarotrampivarotrampanao teknolojia
Ahoana ny TSY HANAOVANA VOLOMBELOM-BAIBOLY Amin'ny Taona